पतिले सोधे ‘म विदेशमा हुँदा तिमीले किन पिल्स खाएकी ? त्यसपछि पत्नीले गरिन् यस्तो कर्तुत ! – दैनिक नेपाल न्युज
काठमाडौं । घटना चितवनको हो। राजधानीसँगै जोडिएको एउटा गाउँ छ, धादिङको छेपाङ । त्यहीँको एउटा परिवारका सदस्य रवि रने सेढाइँ। उनी केही वर्ष अघि मलेसिया गएका थिए । पत्नीले नारायणीको तीरमा विष पिएर आत्महत्या गरिन् । अहिले रवि रने भरतपुर कारागारमा कैदी छन् । मुद्दा हो, आत्महत्या दुरुत्साहनको । यो खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ । रविले मलेसियाबाट मेहनतको मूल्य पत्नीलाई पठाइरहे। तर, फर्किएर आउँदा रित्तै ।
आमाबाबुले पो खर्च गर्थे कि भनेर चितवन भण्डारामा पिप्लेमा गएर सोधिखोजी गरे । आफूले पठाएको रकमबारे पत्नीलाई सोधे, खोजे, जबाफ पाएनन् । अर्को सूचना आइलाग्यो । अनि फेरि पत्नीलाई सोधे, ‘म विदेशमा हुँदा तिमी त पिल्स खान्थ्यौ रे नि नानु’ त्यही कुराले पीडा भएर नारायणीको तीरमा पत्नीले आत्महत्या गरिन् । कुरा सामान्य हो, पतिले पत्नीलाई मनमा लागेको आशंका सोध्नु । उनलाई मर्न जाऊ भनेको त होइन। तर, रवि चैतदेखि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाको पुर्पक्षअन्तर्गत कारागारमा छन्।